Ukuze izimoto emhlabeni wonke eziphoqelelwe izidingo ngokuya elawula. Kusemqoka ukuthi izimoto babehuqa, ukhululekile, lobuchwepheshe kakhulu, futhi-ke, ukonga izindleko kanye nokugcinwa. Phakathi amakilasi eyaziwa babe kakhulu ethandwa kakhudlwana ezine-wheel drive crossovers. Njalo izinkampani zezimoto owaziwa elilodwa noma ngaphezulu nabantu bale zilwane. Kulesi sihloko sibheka imoto isigaba ethandwa, umi ohlwini jikelele.
Ukuze uqale ke Kuhle ukukhumbula ukuthi emotweni kufihlwe ngaphansi kwegama 'crossover'. Enye Incazelo crossover English - «inguqulelo». Futhi le ncazelo ibonisa ngokunembile ukuthi sinjani ngempela isimo izindaba. Phela, eqinisweni crossover - kubukeka chassis umgibeli Suv. imvume Ukwandiswa futhi ngokuvamile phambi kwabo bonke-wheel drive ingalahlekisa mayelana imoto endleleni lefanele. Ngakho-ke konke okufanayo sezwe imoto ukuthi asakhelwanga off-road. Elinye igama lakhe - "amapulangwe aphansi" off-road, noma "Suv" - eqondakalayo uchaza izimoto. Yebo, kuba lula kakhulu ukuba banqobe ezisemadolobheni iqhwa emigodini futhi ride ukhululekile on ukungcola endleleni enhle, kepha hhayi ngaphezulu.
Isilinganiselwa-wheel drive crossovers
Phakathi izimoto onegama sonorous "wonke-wheel crossovers drive", kukhona abamele eziningi. Indlela elula kuwahlukanise ngokwendlela ubukhulu langempela:
Phakathi ethandwa "nabancane" imele njalo edume Mini Cooper. Futhi uma ukubukeka atypical, khomba isithombe sibonelo, ingabe ngaso sonke isikhathi ukunikeza umbono kuwufanele ukugibela - nakho konke izinguquko. Ngaphandle kwakhe, mini owaziwa zihlanganisa Nissan Juke, Audi Q2, futhi Suzuki SX4.
Crossover usayizi compact - iningi. Kukhona zombili amaJalimane ovelele - BMW X1 kanye X3, Volkswagen Tiguan, Audi Q3 futhi Q5, Mercedes GLS futhi Skoda Yeti, abameleli ohlangothini-Korean futhi Japanese. Ukukhanya enhle Subaru xv kanye wehlathi, Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail futhi Qashqai, Mitsubishi ASX futhi, yebo, Toyota Rav4. Iqembu ehlukile crossovers French eyakhelwe, eholwa Renault idasta.
Midsize Crossovers bheka omele ngaphezulu. Kukhona abaziwayo kanye Kia Sorento Hyandai Santa Fe, iBMW X5, Nissan Murano, Volkswagen Touareg, Porsche eCayenne. Kukhona amamodeli ukuthi akuzona ekulalelweni - Bentley Bentayga - ummeleli ehlonishwayo futhi eliqhakazile ozala crossovers.
Phakathi "imidondoshiya" kuyafaneleka le Pathfinder Nissan, Audi le Q7 futhi Mazda CX-9. Bonke - wheel drive crossovers. ukuma okuzenzakalelayo noma umakhenikha njengoba ukuphathwa inquma nomkhiqizi isitshalo.
crossover Russian "Lada Niva"
Phakathi abameleli Russian crossovers kwasekuqaleni ngokuqiniseka ithatha Vaz-2121. Le modeli Classic 3 ngendlu futhi 5-umnyango amafomu side ngaphandle izinguquko eziphawulekayo yakhiqizwa kusukela 70s! Inzuzo enkulu "Niva" - inhlanganisela izimfanelo ezinhle passable nge izindleko. Imishini elula Lada izimoto 4 * 4, izobiza ruble ayizigidi 330 kuphela, noma inkulungwane 5.5 zamadola January izinga.
Uma sibheka amakhono yomsebenzi Vaz-2121, kuyacaca wakhe lokhu uthando abantu. Imoto, ngaphezu unomphela wonke-wheel drive, has a ukudluliswa icala esigcwele nesivinini ukunciphisa izinga. Ngaphezu kwalokho, kukhona kungenzeka mechanical ukukhiya interaxle umehluko. Ekusebenteni, zonke kangcono. Olinganiselayo Ubukhulu imoto evumela kudlule lapho abantu bengeke lunqunywe UAZ. Ngempela, lesi okuthembekile wonke-wheel drive crossover ngentengo iwubuphukuphuku.
Okusanda kwakukhona ukuthambekela maqondana sesimanje imoto ayithandayo. Field nge isiqalo Urban atholwe amabhampa entsha plastic, ngombala omusha wezangaphakathi, kanye air conditioning ne amandla amawindi. It is ngafunda ukuthi lesi kuphela izinyathelo kuqala, futhi imoto edume ulinde nokuzalwa kabusha ngokuphelele e "Field 3". Ithembisa ushintsho oluphelele emzimbeni, injini, eziqondisa ngisho chassis. Okubaluleke kakhulu, i-AvtoVAZ ufuna ukugcina i-price tag elikhangayo imoto Lada 4 * 4. Ngoba okwamanje mncintiswano Classic "Niva" akuyona eRussia.
Popular crossover French Renault idasta
"Idasta" kuthandwa kakhulu phakathi baseRussia ngenxa yezizathu eziningi:
Ukuze Ongoti abaningi crossovers ukhetho best - kungcono "Reno Daster." Ukuhlela kanye ngentengo, "engumFulentshi" yinto emnandi iminyaka embalwa. Namuhla idasta imishini eziyisisekelo ayelingana cishe ama-ruble ayizigidi 490, noma mayelana 8000 zamadola ngesikhathi Januwari izinga. imvume Phezulu 205-210 cm, induduzo kanye nophethiloli ongaphakeme ukusetshenziswa (5.3 amalitha udizili ngalinye km 100 version udizili) - zako.
I "idasta" akukho phansi-shift, kodwa ijubane lakhe lokuqala iyokugqiba konke lokhu ethile. Inketho ezikhangayo kakhulu unqamule izwe futhi petrol - lena, yebo, injini diesel. traction lakhe eliqinile ngesivinini ubuncane ijubane wokuqala wesilisa umxhwele. Yingakho kwabaningi crossover ezikhanga kakhulu - ". Reno Daster" a Ukuhlela kanye intengo nge update 2013 azizange zishintshe. Ukhokha kuphela izindlela kakhulu afana nawo.
Crossover kusukela Czech Republic eRussia - Skoda Yeti
Le nguqulo entsha ye "Skoda Yeti" ubukeka ufana kakhulu "Tiguan" kusukela VW. Lokhu akusona isimanga, ngoba izimoto empeleni abe kuningi abafana ngakho. Ngenxa ukugcwaliswa German "Bigfoot" amaCzech namaRomany baba nakakhulu izimoto kangcono. "Skoda Yeti" uthenga Ongoti ezinhle Russian izimoto enhle. Naphezu ithegi intengo version eziyisisekelo ruble 1 million, imoto has a lot of abalandeli nabanikazi.
Kuyini zikhanga kangaka Czech crossover? Lapha endaweni yokuqala kukhona inhlanganisela ukusebenza ashukumisayo, induduzo kanye nophethiloli umnotho. Esinokwethenjelwa futhi fast "Skoda" 7 kungenziwa ifakwe izinjini ezahlukene kanye embodiments eziningana ukudluliswa. Linani selilonkhe lebantfu labange 3 upetrol kanye ne-4 amandla udizili amayunithi. Ngokuya ukuphathwa, okungukuthi, njengoba umakhenikha futhi othomathikhi, futhi robot. Phakathi kwazo zonke ezahlukeneyo ezikhanga kakhulu iyona 2 litre udizili nge 184 "amahhashi". Ngesikhathi esifanayo ukusetshenziswa diesel ngayinye amakhilomitha 100 esingaphansi 7 amalitha.
IsiShayina ezidonsa crossovers
Umqondo "izinga Chinese" izikhathi eziningana ezashintsha uphawu yayo. Uma eSoviet Union, izimpahla Chinese ayaziswa nabadumile ukuze uthole izinga yabo, ngemva kokuwa, konke kwashintsha. Izimoto abavela eChina ekuqaleni zazimane amakhophi "nozakwethu" bazo abadumile Japanese nabaseYurophu. Umkhuba wokulala namashumi okugcina eminyaka luyimfanelo okwandisa nokuthuthukiswa yabo embonini yezimoto. Uma kuqala Chery Tiggo babe okusuke ezishibhile Toyota Rav 4, kodwa manje-Chinese ezidonsa crossovers bayigugu kakhulu kunalokhu.
Phakathi brand edume kakhulu eRussia eziningana:
Hambisa phezu, noma Hoval.
Ummeleli eliqavile Chinese wonke-wheel drive crossover kuyoba Brilliance V3. Bukhali yesiteleka design futhi omuhle kakhulu izici lobuchwepheshe yobukhulu compact "Suv." 1.5 litre udizili ngaphansi hood iyinkampani nokuphathelene.
Ukukhuluma crossovers Chinese, kuba isibopho ingasaphathwa Chery Tiggo, okuyinto olusha ukuze umzimba lwesithathu, futhi Lifan X80 nge nenombolo ye-serial. Lesi sakamuva isibonelo "Suv" esikhulu okungenani iba izindleko ezinkulu. Umkhuba jikelele ukwandisa izinga siyiqiniso izimoto Chinese sekubangele ukwanda bemvelo izindleko zabo. Ngakho, Lifan X80 izobiza ruble mayelana 1 million. Omunye umkhiqizo Chinese owaziwa - ke Hamba, noma Hoval. Okwamanje, le nkampani sekudayiswe ngempumelelo eRussia wasethula novelties in the 5th nemizimba 6th.
I crossover eqolo kwi drive ngokugcwele
Ngokusho kwemithombo eminingi, indima yokuba crossover eqolo ezifaneleke Spyker D8 Peking-to-Paris. Ekuqaleni, igama inombolo yohlobo kufanele kube 12. Nokho, kusukela injini eyayibekwe 8- futhi 12 cylinder is hhayi ixazululwe phezu D8. Le moto zikanokusho ezenziwe abavela olulodwa ngentengo ayizinkulungwane 300 zamaRandi. Ngaphansi hood ifakiwe, 6.2-litre uphethiloli injini nge "amahhashi" 660, eba 100 km / h amasekhondi angu-5 kuphela. I ngesivinini esiphezulu izimoto - 300 km / h.
ngokushesha Ukubukeka Spyker D8 iyibonisa kahle indlela izimoto ezibizayo nentofontofo phambi kwethu. Ingaphandle Inner ubukeka kahle ngokwengeziwe. Zonke ingaphakathi okunethezeka embozwe isikhumba elincanyana, ukuhlinzeka ikhava ephelele. Phakathi esiqandisini ukuze awunikeze emoyeni obandayo kusukela conditioner emoyeni. I umhlobiso ingaphakathi isebenzisa carbon kanye ne-aluminium. Zonke-wheel crossovers drive ezifana BMW X Series futhi Porsche eCayenne ngemuva, "Spiker" bheka ubudlelwane nje abampofu.
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi omunye crossovers kungaba nangesivinini kunalokho eqolo wabo - Spyker? It kuvela, inguqulo yezemidlalo ka-German "Suv» BMW X6M ngesivinini kweyokuqala ezilikhulu 4.2 imizuzwana. injini yayo 575 "amahhashi" Ingasheshisa imoto 280 km / h, kanti uma senza Tuning ekhethekile, futhi kufika angu-320 / h. Ngenxa yalezi ngesivinini injini imoto lunamandla ka 4.4 amalitha nesizotha, kodwa lapho turbochargers ezimbili afakiwe. Ukushintshela BMW X6M ngesivinini setha 8-speed automatic transmission nge ekhethekile electronic control unit, esinikela cishe osheshayo igiya izinguquko.
crossover Small akusho ungakhululekile
Phakathi miniature parquet SUV Kumele kuqashelwe Japanese Suzuki Kei - ezine-wheel drive crossovers. simo sabo akuyona omkhulu kangaka, kodwa ubukhulu wekugcina, kuhambisana ukonga 0,66- futhi 1 litre izinjini kukhona nabasebenzisi bayo. Imoto ubude 3.4 amamitha. Kude 60 nje cm kuka kunabo bonke emlandweni we Fiat Panda crossover, okuyinto wawenziwe phambi 1991. Ngokumangalisayo, imoto has ezimbili kwezihlalo. Four-wheel drive kuqinisekisa sesimweni esigculisayo esibhedlela endleleni ngaphansi edolobheni eneqhwa. A ukusetshenziswa 5.5 amalitha 100 ikhilomitha ngalinye wesilisa yamjabulisa yimuphi umshayeli.
Crossovers nge high phansi imvume
Kuyaziwa ukuthi maningi imvume phansi emotweni, kuba lula ukuba sinqobe izithiyo. Eneminyaka engu-16 cm ngenhla imvume Ungahambisa ngokunembile phakathi kwemingcele ngaphandle kokwesaba ngoba hook yabo. Abaningi wonke-wheel drive crossover nge ephakeme imvume angawi emfushane yalesi Suv. Eqinisweni ngesikhathi esifanayo UAZ imvume okusezingeni eliphezulu amasondo kuyinto 300 mm. Kodwa ngisho phakathi "Suv" ungakwazi ukuhlukanisa Amaqhawe abo.
Kungokufanayo Russian "Niva" has a imvume umhlabathi 220 mm, okusho waphinda ugcizelela kakhulu off-road khono ayo. On okufanayo phansi imvume uya emotweni Land Rover E-Voque. Cishe 200 mm (197) has a crossover eyaziwa Japanese Toyota Rav 4.
I crossover enkulu Kusolwa Chevrolet Suburban. Ubude bayo kakhulu ngendlela 5.7 amamitha kanye ububanzi ezingaphezu kuka 2 amamitha. Ngasekuqaleni kwaleli imoto kwaba SUV agcwele. Njengoba ezothatha isikhundla izimfanelo Offroad enamandla uphethiloli umnotho kanye nezindleko jikelele, imoto inzuzo. Phela, uzimisele futhi uyakwazi ukuthenga ubuhle obunjalo yaba okungaphezu kakhulu.
Izwe nezimoto permeability ezinhle njalo uyanda. Zonke-wheel crossovers drive kancane esikhundleni izinqola babe izimoto nomndeni Irreplaceable yimuphi amathuba. Kwabe sekuvela ukuthi, kukhona miniature "Suv", futhi superkrossovery ashukumisayo akunika isinkiyankiya kwabanye ezemidlalo imoto.